5 Izimfihlo Zokukhuphula Ibhulogi YeBlog kusuka ku-Semalt
Ukudala ama-athikili ahamba ngegciwane kungukuthi okubaluleke kakhulu kubo bonke abaye baqala ibhulogi. Empeleni,kudinga izenzo ezingaguqukiyo ezicatshangelwayo, ezihlangene njalo. Kusuka ekudaleni i-qualitativeokucuketfwe ekuthuthukiseni isu elihle lezokuxhumana, sonke isinyathelo siyadingeka. U-Ivan Konovalov,Imenenja yokuphumelela kwamakhasimende ye Semalt Amasevisi weDivamenti ahlanganyela ngamasu awusizo onokwandisa ukuhamba kwebhulogi.
1. Dala Okuqukethwe Kwesilwane
Bhala izihloko ezithakazelisayo, ezithakazelisayo ezizoheha abafundi - samsung newsletter. Isihloko sendaba yakhoyinto ebaluleke kakhulu uma ubhala okuqukethwe kwe-viral. Woza ngezihloko ezikhangayo ezizokwenzauthathe ukunakwa kwezivakashi kwi-intanethi. Uma isihloko sakho sihlobisa, khona-ke uzobe uningi kakhulukungenzeka uthole ama-hits amaningi ekuthunyelwe kwakho. Ngaphandle kokudala iziqu ezinhle, bhala izihloko ezinolwazi olude.Ngena emininingwaneni yesihloko sakho bese uchaza amaphuzu akho ngendlela ethakazelisayo. I-elaboratedUkuthunyelwe kuzonxusa izivakashi zakho zebhulogi ukufunda i-athikili yonke. Faka izithombe ezinhle emehlweni akhopost ukuze usize abafundi baqonde indaba yakho ngokucacile. Ngenxa yalokho, abafundi bakho bazokwenzavakashela ibhulogi yakho futhi ukuze ufunde isihloko sakho esilandelayo.
2. Yabelana Ngesihloko Sakho Ngaphezu Kokunye
Uma ufuna ukukhulisa i-traffic kubhulogi yakho, udinga ukukhomba izivakashi eziningi. Abanye abafundi bangafinyelelai-intanethi emini kanye nabanye ebusuku. Khulisa ithrafikhi kubhulogi yakho ngokwabelanaisihloko sakho izikhathi eziningana ngosuku noma ngenyanga. Amapulatifomu amakhulu okuxhumana nabantu abangasizawena ukufeza lokhu yi-Facebook, Twitter, Pinterest, ne-Google +. Joyina amaqembu nemiphakathiokuhlobene nembonini yakho futhi wabelane ngokuphakelayo kwakho..
3. Faka isihloko se-Right
Kukhona izinkulungwane zezingqikithi emakethe. Noma kunjalo, eziningi zazo ngeke zihambisane neyakhoibhulogi. Lokhu kusho ukuthi kufanele ukhethe ngokuhlakanipha bese ufaka okulungile. Isihloko esihle kufanele sibe ngokugcweleukuphendula, okuzoqinisekisa ukuthi ibhulogi yakho ifinyeleleka kumadivaysi ahlukene ahlanganisa ama-desktopsnokubukwa kweselula. Kufanele futhi ukhethe isihloko sokulayisha okusheshayo. Uma isihloko sakho silayisha ngokushesha,yenza izivakashi zihambele ibhulogi yakho futhi ufunde okuthunyelwe okuningi. Ngaphezu kwalokho, khetha isihloko esikuyoumklamo omuhle futhi okhangayo.
4. Engeza inkinobho yokwabelana
Inkinobho yokwabelana ikusiza ukuthi usebenzise amandla wamapulatifomu womphakathi wezokuxhumana ekufinyeleleni izilaleli ezibanzi.Abafundi bahlale bezimisele ukwabelana ngokuthunyelwe okuthakazelisayo. Ngakho-ke, engeza inkinobho yokwabelana kokuthunyelweukuvumela okuqukethwe kwakho kuhambe nge-viral. Lokhu kusho ukuthi abafundi bakho bazokwazi ukwabelana ngokuthunyelwe kwebhulogi yakhoabangane nabalandeli babo. Njengomphumela walokhu kukwabelana, ibhulogi yakho izothola ithrafikhi eyengeziwe.
5. Amazwana kwamanye amabhulogi
Amazwana abe ithuluzi elinamandla, elikusiza ekutholeni ama-backlink kanye ne-traffic. Qaphelaamabhulogi athandwayo nokuphawula ngezihloko zabo kanye namaforamu. Ukuphawula okunenjongo kuyodonsela ukunakwa,futhi cishe, uzothola izimpendulo ezikunika ama-backlinks. Amazwana azokubeka njengendlelauchwepheshe futhi akusize ukuheha eziningi zethrafikhi kubhulogi yakho.
Uchwepheshe we-Semalt u-Ivan Konovalov ufakazela ukuthi ukuqaliswa okuqhubekayo kwezici ezingenhla kuholeleukwandisa ibhulogi yakho yebhulogi. Umkhuba onjalo wamukelwa ngempumelelo ngamakhasimende ethu futhi uqinisekisiweukusebenza kahle kwawo. Kusukela manje, ungasebenzisa lezi zeluleko kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe Semalt ukuthatha ibhulogi yakho ezingeni elilandelayo.